Xiddigaha dhaawacan, kuwa shakigu kujiro iyo kuwa hal jaalle u jira inay seegaan lugta labaad ee CL kulanka caawa PSG v Man City – Gool FM
Haddaba waxaan halkaan ku eegeynaa xiddigaha dhaawacan, kuwa soo laabtay, kuwa shkigu ku jiro kulankan iyo kuwa hal kaar oo digniin ama jeelle ah u jira inay seegaan lugta labaad ee siddeed dhammaadka Champions League.
Haddii aynu ku horreyno kooxda martida loo yahay ee reer France Paris Saint-Germain caawa waxaa dhaawacyo kaga maqan Javier Pastore iyo Marco Verratti kuwaasoo ku kala maqan dhaawacyo kubka iyo gumaarka ah.
Waxaa qasab ah inay taxadar badan ku ciyaaraan xiddigaha kala ah Ibrahimovic, Matuidi iyo David Luiz kuwaasoo haddii ay caawa kaarka jaalaha qaataan seegi doona kulanka lugta labaad ee wareega siddeed dhammaadka Champions League ee ka dhici doonta Etihad Stadium.
Dhinaca kale kooxda reer England ee Manchester City waxaa taam u ah kulankan goolhaye Joe Hart kaasoo dhaawac ku maqnaa kulamadii ugu dambeeyay.
Yaya Toure ayaa awoodi waayay inuu taam u noqdo ciyaarta Parc des Princess oo seegi doona caawa, halka Fabian Delph uu shaki ku jiro taam ahaanshihiisa.
Raheem Sterling iyo Kompany ayaa iyagana weli dhaawacyo ku maqan, iyadoo Otamendi uu isna halis ugu jiro inuu seego kulanka lugta labaad ee siddeed dhammaadka Champions League haddii uu jaale qaato kulanka caawa.